Winter imisebenzi yangaphandle sekuthandwa kakhulu njalo ngonyaka. Russia akuyona akukho ubusika ingxenye yawo ebandayo nezineqhwa e eyaziwa: lapha ungakwazi ukujabulela lenqwaba imisebenzi ebusika. Muscovites azinalo ukuya nomuzi waseJerusalema, kungenzeka ukufunda Ukushushuluza edolobheni. Kwenza akukho mqondo ukuchitha tibalo fabulous eholidini ukuze European ski resort, lapho eduze eziningi kangaka lezihlalo zabo kuze kube iholidi ngaphambi ubusika ne service enhle futhi ngamanani ezifanele.
Ohlonishwa kakhulu futhi kuyabiza indawo, lapho ungathola Ukushushuluza edolobheni, - "Sorochany". Lapha, inani elikhulu emizileni izimo ukhululekile kakhulu i ukuzilibazisa ebusika asebenzayo. Abaningi ukhululekile esihlalweni ngamakheshi uvumele skiers ukuze uthole ngokushesha kuya phezulu athandwayo, futhi ezihlukahlukene zezinto eziphilayo, ngokuvula i-zokushushuluza eqhweni, wenza konke Uzalo kwalibaleka.
resort Ubude eduze eMoscow "Sorochany" has 7 amathrekhi obuphelele kusukela ayi-400 kuya kwezingu-1000. On emthambekeni ngamunye has izindawo ngokwenza iqhwa yokufakelwa ukuthi iqinisekisa ukuzinza isembozo iqhwa ngisho uma kuncibilika iqhwa kanye lokushisa ukweqisa. Ngo emithambekeni amnyama embozwe eliphezulu ukukhanyisa imishini, okuvumela skiers ukujabulela eside yokuchitha isizungu okuthandayo.
Futhi, "Sorochany" ukunikela anhlobonhlobo ski imishini eziqashisayo kanye workshop siqu ngenxa ukukhanda imishini. Ukuze ngamaholide umndeni kukhona cafe, yokudlela kanye playroom yezingane.
Uma ufuna Ukushushuluza edolobheni, "Volen" isilungele ukunikela konke okudingekayo skier. Ngaqala le-ski resort nge silingo eyodwa nje, khuphula, a pair of Cottages, futhi labhalelwa abasebenzi yenkampani "Volen". Kodwa ngilangazelela ukushayela emithambekeni eneqhwa kwaba okukhulu kunalokho yabalelwa. Ngakho manje-ski resort "Volen" - enye yezindawo ezinkulu kakhulu emadolobheni asemaphethelweni. It has emithambekeni 13 7 ikhebula izimoto, namathafa, nemithambeka basuke ovuthayo kahle ebusuku. Amanani ngempela kunengqondo, ngisho nabantu abampofu bangakwazi uphumule lapha.
Ngaphezu imisebenzi entabeni "Volen" linikeza neminye imisebenzi eminingi efana ogibele ihhashi, Paragliding, amathilomu, nemishayo, amabhiliyade, ugibele isihlibhi. Uma ufuna ukushintsha, bese kuba ngu-3 km kusukela entsha ski resort "Stepanovo", ahlome emizileni ihlathi.
Ezemidlalo nokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi "Yakhroma" itholakala enyakatho nesifunda eMoscow, eduze nedolobhana Stepanov. Lokhu ski epaki kuyahluka ingqalasizinda emangalisayo. Isakhiwo yakhelwe ngendlela Alpine futhi kuhlanganisa zokudlela kanye amakamelo ehhotela. "Yakhroma" has eziyishumi zokushushuluza eqhweni, ngalinye elikwazi ifakwe lift. Kubalandeli ukushayela efakwe ukukhanyisa imishini ebusuku. isibhamu Special balondoloze izinga elilungile cover iqhwa.
Isakhiwo Ubuye ezihlukahlukene izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, club ebusuku, sauna, ihholo inkomfa futhi zokuzivocavoca. Kulabo ngifuna Ukushushuluza edolobheni, "Yakhroma" kungaba iyisibusiso real. Lapho ungakwazi ukuqasha ihhashi noma ukugibela indiza, futhi abathandi kwezemidlalo ebusika uzokwazi ukushayela Ukushushuluza hhayi kuphela, kodwa futhi ku skates.
"Snows. com "
"Snows. Com "- indawo ephelele ukuzama Ukushushuluza edolobheni. Ngokungafani nezinye ski resort, egijima kuphela isizini abandayo, "snows. Com "inikeza amasevisi zayo unyaka wonke. Isakhiwo ifana ipayipi elikhulu, onikeza ukubuka Futuristic. Izikhungo esinikeziwe kunabayeni yaseYurophu. Kukhona ukuphakamisa futhi ahlukahlukene ukwenza amaqhinga on ukushibilika eqhweni noma eqhweni. Wabasaqalayo, ifakwe emthambekeni olulodwa, lapho wazibonela abafundisi ngomumo ukuchaza izinto eziyisisekelo Wabasaqalayo.
Kukhona eyodwa ngaphezulu indawo enikeza Ukushushuluza edolobheni, - "Umvini". Isakhiwo inikeza 4 emizileni skiers, ne ukukhanyisa kakhulu futhi ifakwe ngamakheshi. Amadivayisi ngoba ukudalwa iqhwa yokufakelwa ivumela awahluphi Ukugibela ku ski resort kuyo yonke inkathi. Uma ungenalo imishini yakho, lapha ungakwazi ukuqasha, futhi abafundisi unake kuzosiza ukwenza izinyathelo kuqala ukuthuthukiswa kwezemidlalo ebusika. Ubani ufisa ukuthatha ikhefu Ukushushuluza ungaya cafe noma uthathe isikhathi sokuthi izoso nge izinkuni. Ukungena le nsimu yayibona "Umvini" mahhala.
Ski club leonid Tyagachev
Kuyinto omdala ski resort edolobheni. On amagquma ayo izitimela Russian iqembu lesizwe ngo-skiing kanye nokushova. Igama lalesi ski resort yethiwa owawina Imidlalo ye-USSR Leonida Tyagachova. 8 ski emizileni, ahlangabezana zonke namazinga omhlaba kubekwe phakathi eziyinkimbinkimbi. Nethezeka emva ukuqeqeshwa kanzima kungaba-isikhungo SPA noma pool. Ukuba khona eziyinkimbinkimbi ehhotela ngeke sijabulise nalabo abathanda ukushushuluza edolobheni. Kukhona ibha ezemidlalo, yokudlela, ithenisi enkantolo, ice rink, ungakwazi ukukhwela snowmobile noma ATV, futhi uma ukudonsa phezulu esibhakabhakeni, le trike - at service yakho.
sibhedlela "Zvenigorod" itholakala amakhilomitha 60 kusuka eMoscow. Uma sihleleke ski resort. Azikho izibhamu, kodwa amazinga ebusika njalo iqhwa zemvelo ngokwanele. resort Ski "Zvenigorod" has a ski emthambekeni nge ngamakheshi, elise Awukude resort. Isisetshenziswa ukwehlisa intaba kungaba kuqashwe. "Zvenigorod" - ski resort ezokwenza ukwanelisa umuntu ufuna iholide esifundeni Moscow: ukushushuluza, swimming pool, yokudlela, umtapo, amabhiliyade, ithenisi enkantolo, sauna, ejimini - konke lokhu nokunye okuningi siyo- inzuzo nenjabulo ukuchitha zabo isikhathi.
Ngesikhathi nedlelo Ngasenyakatho edolobhaneni Paramonovo. Lokhu ski resort waziwa kubalandeli abaningi ezemidlalo ebusika, ngoba lokhu lapho kukhona igquma elikhulu esifundeni Moscow. Ngakho uma ufuna Ukushushuluza edolobheni, bese unake Paramonovo, ozokuthanda ke. Imikhondo kukhona Paramonovskogo emthambekeni udonga. Lapha ungathola emithambekeni emaweni for skiers okwehlela emithambekeni mnene Wabasaqalayo. Isithwathwa Paramonovo lingashoni isikhathi eside kunaleso kwezinye ski resort, njengoba bonke emithambekeni zibheke enyakatho. Ukukhanyisa ikuvumela ukuba bagibele, emini nje kuphela kodwa ebusuku, kanye amathilomu nezindawo zokudlela ukuhlinzekela ukudla okumnandi skiers elambile.
Bambalwa abasolwa edolobheni athuthukile njengendlela ski iholide. Abantu abaningi bayaqhubeka bahambela izindawo zokungcebeleka imfashini European nakuba ngingazazi izinto olulandelayo welulela real "eMoscow Switzerland." Nokho, abantu njalo ngonyaka ezingasho exhunywe asebenzayo iholide ebusika ski resort eduze eMoscow, njengoba kufakazelwa ukunwetshwa njalo ezikhona nokwakha amasha. Uma ezitaladini ukhathele kwelanga, kanjalo eMoscow, uthuli, ngentuthu futhi yokuphila ngendlela ephambene neyemvelo okusheshayo, hawu kuya ski resort: lapha uzizwa uyaphila futhi. Uma ufuna ukuya khona nezingane, pre-isidingo ukuthola ukuthi leli eziyinkimbinkimbi uthatha izihambi abasebasha, futhi waba minyaka eminingi kangaka.
St Maarten: incazelo, umlando, ezikhangayo futhi amaqiniso athakazelisayo
Edolobheni elihle Samara. Inkazimulo isikwele "Vertoletka" - izindawo izifanekiselo edolobheni
Ingozi nezinzuzo impilo nogologo. Zingaki iziqu nogologo?
Ukugeza umshini ekhishini: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Teething izimpawu ezinganeni
Ukukhethwa kanye ukufakwa amaslayidi yezingane amachibi
22 umtapo emangalisayo kuwufanele ngokuvakashela zonke bibliophile
Indlela ukuqinisa izinzipho ikhaya